Qiso Sheeko Gaaban, By. Prof. Mohamed Ahmed Farah (Jaafaa) | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Wiil iyo Aabbihii ayaa waxay ku wada noolayeen magaalo, waxayna xoolo lahayeen hal dameer oo ay ku xamaalan jireen, oo intay xaabo kaymaha uga soo guraan ayay iibin jireen oo nolol maalmeed kooda ka raadsan jireen. Wiilku ma ahayn mid bulshada si fiican u dhex galay oo shaqadiisa ayuu ku ekaan jiray, waxaase uu aad ula yaabi jiray oo uu ka war hayay in bini’aadamka weligood xan iyo dulmi aan laga waayeynin, adigu wax wanaagsan same ama ha sameynine.
Wiilku wuxuu aabahii ku yidhi “aaboow dadku naftooda may ku ekaadaan, maxaa isku diraya oo isu geynaya?, sow qof walba tiisa kuma filna, waxa la sheegayo ee ah in dadka meel looga nabad galaa aanay jirin sax miyaa?” Aabihii oo ahaa nin waayo arag ah, sanaddo badana jirey, ayaa isagoo doonaya inuu tusaaleeyo in arrinta run tahay ayuu wuxuu ku yidhi “Maandhow, berri marka waagu baryo ayaad indhahaaga wax ku arki doontaayee, iska seexo caawa”
Maalintii afraad ayaa Odeygii wiilkii sii ku yidhi “maandhow ma aragtaa? Bal inaga wada deji oo labadeenuba wada lugeeynee”, wiilkii iyo aabbihiisa way wada lugeeyeen, cabbaar markay socdeen ayaa waxay soo agmareen koox kale, markay sii dhaafayeen ayaa waxay yidhaahdeen “Waar bal eega labada nine e dameerka iska daba jooga, alla doqonsanaa!, Bal may qof saaraan dameerku waxba ma saarnee!!”.
Markii intaas dhacday ayuu Aabihii, ama Odeygii ku jeestay wiilkii oo ku yidhi “Aabo ma aragtaa?” Wiilkii oo wax weyn faa’iday ayaa yidhi “Wallee aabboow dad meel na uga baxsan meysid, gurigeena iyo dameer keenana ku dhahoo, Waxaase Doqon ah ninkii Dantiisa hadal Dad u daaya” .
Qalinkii Prof. Mohamed Axmed Faarax (Jaafaa)